उच्च प्रदर्शन बजारका लागि परम टेक स्ट्याक Martech Zone
२०११ मा, उद्यमी मार्क एन्डरिसनले प्रसिद्ध रूपमा लेखे, सफ्टवेयरले संसारलाई खाइरहेको छ। धेरै हिसाबले, Andreesen सही थियो। तपाईं दैनिक आधारमा कति सफ्टवेयर उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ सोच्नुहोस्। एकल स्मार्टफोनमा सयौं सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू हुन सक्छन्। र यो तपाईंको जेबमा केवल एउटा सानो उपकरण हो।
अब, व्यापार संसारमा उही विचार लाई लागू गरौं। एकल कम्पनीले सयौं, यदि हजारौं होइन, सफ्टवेयर समाधानहरूको प्रयोग गर्न सक्दछ। वित्त देखि मानव संसाधन र बिक्री, हरेक विभाग केहि क्षमता मा टेक्नोलोजी मा निर्भर गर्दछ। यो आजको संसारमा व्यापार सञ्चालनको लागि अभिन्न बनिएको छ।
मार्केटिंग फरक छैन। धेरै आधुनिक मार्केटि teams टोलीहरू विभिन्न सफ्टवेयर-ए-अ-सर्भिस (सास) समाधानहरूमा भर पर्छन् जुन क्रस टोलीको सहयोगको लागि ईन्धन, चलिरहेका प्रोजेक्टहरू प्रबन्ध गर्न, र ट्र्याक अभियान प्रदर्शन गर्न। तर अधिक संग 7000 SaaS उत्पादनहरू मात्र मार्केटिंग अन्तरिक्षमा, यो अलग गर्न गाह्रो हुन सक्छ पर्छ-haves देखि राम्रो गर्न को लागी.
यस लेखमा, म ठ्याक्कै कुन सफ्टवेयर समाधानहरू तपाईको मार्केटिंग टेक स्ट्याकमा अभिन्न हुन्छ र किन। साथै, म बाटोमा केहि विशिष्ट उदाहरणहरू पनि साझेदारी गर्दछु।
मार्केटिंग स्ट्याक भनेको के हो?
अवधि मार्केटिंग स्ट्याक सफ्टवेयर उपकरण र टेक्नोलोजीहरूको संग्रहलाई सन्दर्भ गर्दछ मार्केटर्सले उनीहरूको काम गर्नका लागि प्रयोग गर्दछ। यो ठूलो छाता अवधि अन्तर्गत पर्दछ टेक स्ट्याक जुन आईटी पेशेवरहरूले बारम्बार प्रयोगको लागि प्रोग्रामिंग भाषा र फ्रेमवर्क समावेश गर्न प्रयोग गर्दछ।
एक मार्केटिंग स्ट्याक अनिवार्य रूपमा समाधानको सूची हो जुन तपाईंको टीमलाई यसको उत्तम कार्य गर्न सशक्त बनाउँछ। यी उपकरणहरू दक्षता बढाउन, सहयोग बढावा दिन, र संचार सुधार गर्न अभिन्न छन्।
परम मार्केटिंग टेक स्ट्याक कसरी निर्माण गर्ने
आजकल, लगभग सफ्टवेयर छ सबै। मैले हेर्ने तरिकाले त्यहाँ दुई प्रकारका सास उपकरणहरू छन्: पर्छ-haves र राम्रो गर्न को लागी.
हुनै पर्ने उपकरणहरू ती हुन् जुन तपाईंको काम कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक छन्। The-to-haves राम्रो छ, बस राम्रो छ। तिनीहरूले तपाइँलाई अधिक रचनात्मक वा संगठित हुन मद्दत गर्न सक्छन्, तर यो अझै पनि सम्भव छ ती तिनीहरूको लक्ष्य बिना।
तपाईंको मार्केटिंग स्ट्याक दुबला राख्नु महत्वपूर्ण छ। किन? किनकि सफ्टवेयर महँगो छ। वास्तवमै महँगो। व्यवसायहरूले प्रयोग नगरिएका सफ्टवेयर इजाजतपत्रहरूमा हजारौं डलर बर्बाद गर्न सक्छन् यदि तिनीहरूले ध्यान दिएन भने कुन उपकरण आवश्यक छ।
थप रूपमा, धेरै धेरै सास उत्पादनहरू असमर्थ हुन सक्छ र यसलाई व्यवस्थित रहन गाह्रो बनाउँदछ। सफ्टवेयरले तपाईको जीवन सजिलो बनाउँदछ, कडा होईन।
तल, तपाइँ तपाइँको मार्केटिंग टेक स्ट्याक को लागी सा सा उपकरणको एक सूची फेला पार्नुहुनेछ:
ग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापन
ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन (CRM) सफ्टवेयर व्यवसायहरुलाई सगाई बढाउन र आफ्नो अवस्थित र सम्भावित ग्राहकहरु संग सम्बन्ध निर्माण गर्न डिजाइन गरिएको हो।
अधिकांश CRM उपकरणहरू डाटाबेसको रूपमा कार्य गर्दछन् जसले ग्राहक जानकारी र अन्तर्क्रिया भण्डार गर्दछ। उपकरण भित्र, प्रयोगकर्ताहरूले ग्राहकसँगको सम्बन्धको सम्पूर्ण इतिहास, साथै बिक्री सम्झौताहरू जुन हालै प्रगतिमा रहेका छन् सम्बन्धित जानकारी हेर्न सक्दछन्।
सीआरएम सफ्टवेयर मुख्यतया बिक्री, मार्केटिंग, र कार्यकारी टोली द्वारा प्रयोग गरीन्छ।
सम्भावितता र अवसरहरू सम्बन्धी जानकारी व्यवस्थित गर्न बिक्री टोलीहरू सीआरएममा निर्भर हुन्छन्। अधिकारीहरूले राजस्व र बिक्री पाइपलाइनमा कडा नजर राख्नको लागि समान प्रयोग गर्दछन्। मार्केटिंग पक्षमा, CRM मार्केटिंग योग्य लीडहरू र अवसरहरू ट्र्याक गर्नको लागि उपयोगी छ।
सीआरएम मार्केटिंग र बिक्री टोलीहरू बीचको दूरी कम गर्न र एक संस्था भरमा उत्तम पign्क्तिबद्धता प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
बजारमा सयौं भिन्न सीआरएम उपकरणहरू छन्। यहाँ स्टन्डआउट्स को एक जोडी छन्:
SalesForce - सेल्सफोर्स सबै आकारको व्यवसायहरूको लागि क्लाउड-आधारित CRM सफ्टवेयरको अग्रणी प्रदायक हो। जे होस् सीआरएम सेल्सफोर्सको मुख्य प्रस्ताव हो, कम्पनीले ग्राहक सेवा, मार्केटि auto स्वचालन, र वाणिज्य समाधानहरू सामेल गर्न यसको उत्पादन लाइनहरू विस्तार गर्‍यो। लगभग संग १%% कुल बजार शेयर, सेल्सफोर्सले सीआरएम स्थानमा हावी। र राम्रो कारणका लागि - यसको मजबूत क्लाउड क्षमताहरूको लागि प्रयोगकर्ताहरू र अनुसन्धानकर्ताहरू बीच प्लेटफर्म लगातार शीर्ष-मूल्या rated्कन गरिन्छ, विशेष गरी जब यो इन्टरप्राइज स्पेसमा आउँदछ।
सम्पर्क Highbridge बिक्री बल सहयोगका लागि
कम कष्टप्रद सीआरएम - कम कष्टप्रद सीआरएम विशेष रूपमा साना व्यवसायहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो जुन सबै घण्टी र सिटाहरू बिना नै साधारण उपकरणको आवाश्यक हुन्छ। यो सीधा कुरा हो, र तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, "कम कष्टप्रद"!
कम कष्टप्रद सीआरएमको लागि साइन अप गर्नुहोस्
परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयरले टोलीहरूलाई संचार सुचारु गर्न, कार्यप्रवाहहरू प्रबन्ध गर्न, र हालको परियोजना पहलमा ट्याबहरू राख्न सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न अनुमति दिन्छ।
मार्केटरहरू सहयोगी वातावरणमा काम गर्नको लागि सामान्य छ जुन मुख्य रूपमा प्रोजेक्ट-आधारित हुन्छ। तपाईं भित्र काम गर्ने मार्केटिंग अनुशासनको फरक पर्दैन, आयोजना व्यवस्थित रहन र प्रोजेक्ट प्रगति ट्र्याक गर्न प्रोजेक्ट ब्यवस्थापन उपकरण आवश्यक छ।
यस कोटीका धेरै समाधानहरूले तपाईंलाई दैनिक / साप्ताहिक कार्यहरूको लागि अनुकूल कार्यप्रवाहहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईंलाई आगामी डेडलाइनका लागि उत्तरदायी रहन मद्दत गर्दछ। यो विशेष गरी सहयोगी हो यदि तपाईंको टोलीले पूर्ण वा आंशिक टाढाबाट काम गर्दछ।
परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर उदाहरण
परियोजना व्यवस्थापन एक भीड बजार हो, बिभिन्न मूल्य बिन्दुमा धेरै समाधानहरूको साथ। उदाहरणमा समावेश:
asana - आसन सबै आकारको व्यवसायका लागि लगातार शीर्ष मूल्या rated्कन गरिएको परियोजना व्यवस्थापन समाधान हो। उपकरणले विभिन्न प्रकारका कार्य प्रबन्धन सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जुन सहयोग र अनुकूलनको लागि अनुमति दिन्छ। आसनले टोलीको उत्पादकता र व्यक्तिगत कार्यलाई समर्थन गर्दछ, प्रयोगकर्तालाई आफ्नै कार्य प्रवाह अनुकूलित गर्न र टोलीको पहलमा योगदान पुर्‍याउन। प्रयोगकर्ताहरूले पनी क्यालेन्डरमा उनीहरूको कार्यहरू निर्माण गर्न सक्दछ, के कारण हो र कहिले हुन्छ भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ।
आसन सित्तैमा प्रयास गर्नुहोस्
Wrike - Wrike एक प्रोजेक्ट ब्यबश्थापन उपकरण हो जुन हाइपर-ग्रोथ मोडमा व्यवसायका लागि उद्यम-स्तर सुविधाहरूसँग निर्मित छ। यद्यपि Wrike ले धेरै उद्यम-ग्रेड एकीकरण प्रदान गर्दछ, समाधान अझै पनि पूर्ण मार्केट मिड-मार्केट र साना व्यवसायको लागि कार्य गर्दछ।
Wrike मा नि: शुल्क सुरू गर्नुहोस्
२०१ 2016 मा, कम्पनीले मार्केटर्सको लागि Wrike समावेश गर्नका लागि यसको उत्पादन लाइन विस्तार गर्‍यो, जुन सामान्य मार्केटिंग कार्यप्रवाहहरूको नक्कल गर्नको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको थियो।
मार्केटरहरूको लागि Wrike विपणन टोलीहरूलाई संगठित रहन र सामग्री सिर्जना, घटना व्यवस्थापन, र जानु-बाट बजार प्रक्षेपण जस्ता साझा पहलहरूमा कार्यान्वयन गर्न मद्दतको लागि विशिष्ट रूपमा स्थितिमा छ। उपकरणले तपाईंलाई सुरू गर्न मद्दत गर्न परियोजना टेम्प्लेटहरू पनि प्रदान गर्दछ।
मार्केटिंग अटोमेसन सफ्टवेयर मार्केटिंग टीमहरूलाई नेतृत्व उत्पादन, सामाजिक मिडिया पोष्टिंग, र ईमेल मार्केटिंग गतिविधिहरू सम्बन्धित कार्यप्रवाह स्वचालित गर्दछ।
यस प्रकारको उपकरणको साथ आउने स्पष्ट समय बचत फाइदाहरू बाहेक, मार्केटिंग अटोमेसन सफ्टवेयरले मैन्युअल प्रयासको आवश्यकता बिना नै विभिन्न अभियानहरूमा व्यक्तिगत सन्देशहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यी अभियानहरू चौबीसै घण्टाको लागि सेट अप गर्न सकिन्छ, यद्यपि तपाईं तिनीहरूको प्रबन्धन गर्न त्यहाँ हुनुहुन्न।
मार्केटिंग स्वचालन उदाहरणहरू
यो मार्केटिंग अटोमेसन उपकरणका लागि अन्य टेक्नोलोजीहरूको साथ एक सबै-समाहित प्लेटफर्ममा संयोजनको लागि सामान्य हो।
HubSpot - हबस्पट लोकप्रिय ग्रो-टु ग्रोथ प्लेटफर्म हो जसको उद्देश्य व्यवसाय, बिक्री, मार्केटिंग, र ग्राहक सेवा उपकरणहरू उनीहरूलाई सफल बनाउन आवश्यक पर्दछ। हब्स्पटको मार्केटिंग हब प्लेटफर्मको अग्रणी मार्केटि auto स्वचालन प्रस्ताव हो। उपकरणसँग सम्बन्धित क्षमताहरूको चौड़ाई छ नेतृत्व पुस्ता, ईमेल मार्केटिंग, र एनालिटिक्स।
संग सुरू गर्नुहोस् Hubspot
MailChimp - के मात्र सुरुवात भयो जुन एक ईमेल मार्केटिंग सेवा बढ्यो MailChimp को लोकप्रिय सबै इन-वन मार्केटि auto स्वचालन प्लेटफर्म साना व्यवसायहरूतर्फ।
मेलचिम्प विशेष गरी यसको लचिलो मूल्य निर्धारण योजनाहरूको कारण साना व्यवसायमा अपील गर्दैछ।
त्यहाँ एक नि: शुल्क मोडेल छ जुन उनीहरूको शुरुआती चरणहरूमा व्यवसायका लागि सबै आधारभूत मार्केटिंग स्वचालन प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ। MailChimp ले टोलीको लागि भुक्तानीको रूपमा तपाइँको योजना प्रदान गर्दछ जुन केवल उपकरणको उपयोगमा योजना गर्दछ यहाँ र त्यहा.
खोज इञ्जिन अनुकूलन उपकरण
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) सफ्टवेयरलाई व्यवसायिकहरूलाई उनीहरूको जैविक खोज रैंकिंग सुधार गर्न र थप पत्ता लगाउन सक्षम बनाउनको लागि तैयार गरिएको छ।
एसईओ उपकरण मार्केटर्सले कुञ्जीशब्द अनुसन्धान, ब्याकलिks्क निर्माण, र अवस्थित वेब सामग्रीको लेखा परीक्षण गर्न समग्र डिजिटल वृद्धिलाई मद्दत गर्न विभिन्न उपयोगी सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। यि धेरै समाधानहरूमा अन्तर्निहित विश्लेषण क्षमताहरू पनि हुन्छन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको एसईओ प्रयासहरूको प्रभाव ट्र्याक गर्न र मापन गर्न मद्दत गर्दछ।
सबैभन्दा प्रभावकारी मार्केटिंग स्ट्याकले तपाईंको मार्केटि team टीमलाई आत्मविश्वासपूर्वक निर्णय लिन सशक्त बनाउँदछ। एक एसईओ को रूप मा, यो महत्वपूर्ण छ कि एक कुञ्जी खोज अनुसंधान उपकरण को उपयोग गर्न को लागी Semrush, Ahrefs जस्तै लिंक निर्माण उपकरण, र गुगल वा Adobe विश्लेषक जस्तै एक विश्लेषण उपकरण। अरू सबै चीज पाउनु राम्रो छ तर आवश्यक छैन।
Liam Barnes, वरिष्ठ SEO विशेषज्ञ मा निर्देशन
SEO सफ्टवेयर उदाहरणहरू
राम्रो समाचार। SEO सफ्टवेयर कसरी लिभ्याउन सकिन्छ भन्ने जान्नको लागि तपाईलाई विशेषज्ञको रूपमा लिनु पर्दैन।
धेरै एसईओ सफ्टवेयर समाधान सहज र प्रयोग गर्न सजिलो हुन्, शुरुआतीहरूको लागि पनि। अर्कोतर्फ, त्यहाँ उन्नत एसईओ उपकरणहरू पनि छन् जुन थप टेक्निकल सफ्टवेयर क्षमताहरूको आवश्यकता पर्दछ। यो सबै निर्भर गर्दछ जुन तपाईं जैविक खोजी मार्फत पूरा गर्न खोज्नुभएको छ!
Ahrefs - अहरेफ्सले किवर्ड रिसर्च, रैंक ट्र्याकिंग, लिंक निर्माण, र रिपोर्टिंग सहित विभिन्न क्षमताहरूको एसईओ उपकरणहरूको बृहत सूट प्रस्ताव गर्दछ। यो एक सबै मा एक उत्पाद को मार्केटर्स र सबै अनुभव स्तर को एसईओ पेशेवरहरु लाई आफ्नो जैविक यातायात रैंकिंग बढाउन मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो।
तपाईंको Ahrefs परीक्षण सुरू गर्नुहोस्
Ahrefs मुख्य रूपमा एक backlink उपकरण को रूपमा शुरू भयो; यद्यपि यसको विस्तारित प्रस्तावहरूले एसईओ अन्तरिक्षमा प्रमुख खेलाडीको रूपमा कम्पनीलाई क्याप्टलेस्ट गरेका छन्। यदि तपाईंलाई एक साधारण अन-पृष्ठ एसईओ उपकरण आवश्यक छ जुन (लगभग) सबै गर्छ, Ahrefs तपाईंको लागि विकल्प हुन सक्छ।
ScreamingFrog एसईओ स्पाइडर - ScreamingFrog एक बेलायत आधारित खोज मार्केटिंग एजेन्सी हो जुन यसको SEO स्पाइडर उत्पादनको लागि परिचित छ। एसईओ स्पाइडर एक लोकप्रिय वेब क्रलर हो जुन गहन टेक्निकल एसईओ अडिटहरू सञ्चालनको लागि प्रयोग गरिन्छ। उपकरणको प्रयोग गरेर, मार्केटरहरूले भाँचिएका लि links्कहरू, अडिट रिडाइरेक्ट्स, नक्कल सामग्री, र अधिक पत्ता लगाउँदछन्। एसईओ स्पाइडर समाधानले एकदम विशिष्ट प्रकार्य गर्दछ जुन प्राविधिक एसईओसँग अधिक प्रासंगिक छ। यो उपकरण सब भन्दा राम्रो एक एसईओ उपकरण को साथ संयोजन मा प्रयोग गरीन्छ, जस्तै Ahrefs। यदि तपाईं चीजहरूको टेक्निकल पक्षको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने, ScreamingFrog ले एक नि: शुल्क संस्करण प्रदान गर्दछ जुन अझै आधारभूत अडिटि function प्रकार्यात्मकताहरू छ।
डाउनलोड चिच्याउने फ्रुग एसईओ स्पाइडर
सामाजिक मीडिया व्यवस्थापन
सामाजिक मिडिया उपकरणहरूले कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई पोष्ट अनुसूची गर्न, उन्नत प्रयोगकर्ता विश्लेषणहरू पहुँच गर्न, र मोनिटर ब्रान्ड उल्लेख… लाई केही नाम दिन अनुमति दिन्छ।
यो विशेष गरी एजेन्सीहरू वा ठूला कम्पनीहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ जुन एक पटकमा धेरै सोशल मीडिया प्रोफाइलहरू चलाउँछ। पोष्टहरू दिन वा हप्ताहरूको लागि अग्रिम तालिकाबद्ध गर्न सकिन्छ, तपाईंलाई प्रत्येक पोष्ट आफ्नै हातले प्रकाशित भन्दा रचनात्मक रणनीतिमा बढी समय खर्च गर्ने क्षमता दिईन्छ।
सामाजिक मिडिया प्रबन्धन उदाहरणहरू
केहि सामाजिक उपकरणहरू सबै मा एक धेरै धेरै विभिन्न प्रकार्यका साथ छन्, जबकि अन्य प्लेटफर्म विशेष वा एक विशेष सुविधामा केन्द्रित छन्, जस्तै सामाजिक मिडिया अनुगमन। केही उदाहरणहरूमा हेरौं:
सामाजिक स्प्राउट गर्नुहोस् - स्प्रउट सामाजिक एक मिडिया मा सामाजिक मीडिया प्रबंधन को लागी एक उपकरण हो। समाधानले प्रयोगकर्ताहरूलाई फिचरहरूको सम्पूर्ण सूट प्रदान गर्दछ जुन पोस्ट स्वचालन, ग्र्यानुलर इंगेजमेन्ट एनालिटिक्स, र प्रदर्शन रिपोर्टि include समावेश गर्दछ।
नि: शुल्क अंकुरण सामाजिक परीक्षण सुरू गर्नुहोस्
स्प्राउट सामाजिक यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री इंटरफेस र उन्नत रिपोर्टिंग क्षमताहरूको लागि परिचित छ। यदि सोशल मिडिया मार्केटिंग तपाईंको व्यवसायको लागि प्रमुख राजस्व चालक हो भने, स्प्राउट लगानीको लागि राम्रो छ।
Hootsuite - Hootsuite एक लोकप्रिय सामाजिक मीडिया प्रबंधन प्लेटफर्म हो व्यक्ति र सबै आकार को व्यवसाय को लागी डिजाइन। उपकरणले नियमित सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जस्तै पोष्ट अनुसूची, साथै अधिक उन्नत सुविधाहरू जस्तै अनुकूलन योग्य ड्यासबोर्डहरू, सामाजिक विज्ञापन प्रबन्धन, र व्यापार खुफिया विश्लेषकहरू।
एक Hootsuite डेमो अनुरोध गर्नुहोस्
Hootsuite प्रमुख भिन्नता? यसको किफायती मूल्य निर्धारण। त्यहाँ एक निःशुल्क टियर पनि छ जसले सीमित तालिका क्षमताहरूको लागि अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंको टोलीले अझ बढी लागत प्रभावी समाधान चाहान्छ जुन अझै पूर्ण रूपमा कार्य गर्दछ, Hootsuite एक ठोस विकल्प हो।
सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली
सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) डिजिटल सामग्री प्रबन्ध, भण्डारण, र प्रकाशन गर्न कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ। यसले पाठ, डिजाईन छविहरू, भिडियो, अडियो र अन्य सबै डिजिटल सम्पत्तिहरू समावेश गर्दछ जुन वेबसाइटको अनुभवमा थप्दछ। CMS ले तपाईंलाई स्क्रैचबाट नयाँ कोड निर्माण गर्न आवश्यक बिना नै यी सबै सामग्रीहरू होस्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईंको टीमले नियमित रूपमा नयाँ सामग्री सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दछ भने, तब सीएमएस समाधान आवश्यक हुन्छ। अधिकांश सीएमएस उपकरणहरूले अतिरिक्त एसईओ प्रकार्यहरू पनि प्रदान गर्दछ जुन जैविक खोजीका लागि सामग्री अनुकूलन गर्न सजिलो बनाउँदछ - जसले यसलाई थप पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
तपाइँको व्यवसायको लागि सहि CMS छनौट मुश्किल हुन सक्छ किनभने उपकरणलाई तपाइँको वेबसाइटको अवस्थित पूर्वाधारसँग सहजै एकीकृत गर्न आवश्यक छ। भाग्यवस, प्राय: सामग्री व्यवस्थापन समाधानहरू त्यसो गर्न डिजाइन गरिएको हो। तल, तपाईले दुई लोकप्रिय विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ:
हबस्पट सीएमएस हब - माथि उल्लेख गरिए अनुसार हबस्पट मार्केटिंग, बिक्री, र ग्राहक सेवा टोलीहरूको लागि सफ्टवेयरको एक प्रमुख प्रदायक हो। हबस्पटको सीएमएस प्रस्ताव थुप्रै सामग्री मार्केटि teams टोलीहरूको लागि लोकप्रिय विकल्प हो। उल्लेखनीय सुविधाहरूले सामग्री लेखन, एक धनी पाठ सम्पादक, र मजबूत रिपोर्टिंग ड्यासबोर्डहरू समावेश गर्दछ।
अनुरोध Hubspot CMS डेमो
हुबस्पप प्लेटफर्म पहिले नै सीआरएम र मार्केटिंग अटोमेशन जस्ता अन्य निर्मित समाधानहरूको साथ आउँदछ, यो मार्केटरहरूको लागि स्मार्ट विकल्प हो जुन सबैमा एक उत्पादन चाहिन्छ। थप रूपमा, HubSpot CMS ले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ मिक्स र मिलान विशेषताहरु। यदि तपाईं आफ्नो ब्ल्ग बिभिन्न प्लेटफर्ममा होस्ट गर्न चाहानुहुन्छ, तर अझै तपाईंको वेबसाइटको अवतरण पृष्ठहरूका लागि हब्स्पटको सीएमएस प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईं सक्नुहुन्छ।
WordPress - WordPress एक खुला स्रोत सामग्री प्रबंधन प्रणाली हो। सफ्टवेयरले एक तरीकाले कार्य गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न प्लगइनहरू र टेम्पलेटहरू स्थापना गर्न उनीहरूको वेबसाइटको कार्यक्षमता र उपस्थिति अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ।
एक WordPress साइट शुरू गर्नुहोस्
वर्डप्रेस बजारमा सब भन्दा पुरानो र सबै भन्दा बढी प्रयोग हुने CMS उपकरण हो। त्योसँग भनिए, यो पनि एक स्व-होस्ट गरिएको उपकरण हो, जसको मतलब यो हो कि तपाईंले अझै पनि वेब होस्टिंग प्रदायक खोज्नु पर्छ र यसलाई काम गर्नको लागि कस्टम कोड सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।
टेक-प्रेमी मार्केटरको लागि जो अन्तहीन अनुकूलन अवसरहरू चाहान्छ, वर्डप्रेस तपाईको सबै भन्दा राम्रो मित्र हुनेछ।
यसलाई तपाइँको बनाउनुहोस्
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो सूची पूर्णतया नजिक छैन।
यदि तपाईं सबै ट्रेडहरूको एक ज्याक हुनुहुन्छ भने, तपाईं यी सबै सफ्टवेयर उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि केहि; तपाईंसँग विभिन्न उपकरणहरू छन् जुन तपाईंको लक्ष्यहरूको लागि राम्रो काम गर्दछ। यदि तपाईंको भूमिका एक हाइपर-विशिष्ट प्रकार्यमा केन्द्रित छ, जस्तै डिजिटल विज्ञापन, यो सम्भव छ कि तपाईंको मार्केटिंग स्ट्याक थोरै दुबै देखिन्छ।
टेक स्ट्याकको बारेमा ठूलो कुरा यो हो कि तपाईंसँग यसलाई आफ्नै बनाउने शक्ति छ। यी सुझावहरूलाई दिमागमा राखेर, तपाईं सीमात रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको मार्केटि team टोलीलाई अद्वितीय रूपमा सफल बनाउँदछ।
मार्केटिंग सफ्टवेयर केवल व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको जत्तिकै शक्तिशाली छ। खोज्नुहोस् कसरी निर्देशक टोलीले तपाइँको व्यवसाय लाई मद्दत गर्न सक्छ गम्भीर खोजी मार्केटिंग परिणामहरू प्रदान गर्न तपाईंको टेक स्ट्याक भूत विस्तार गर्नुहोस्।
प्रकटीकरण: यस लेखमा यस सम्बन्धी लिंकहरू प्रयोग भएका छन्।
टैग: हाफasanaसीआरएमग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापनकसरी मार्टेक स्ट्याक निर्माण गर्नेहबस्पट सेमीकम कष्टकर crmmailchimpमार्क एन्डरिसनमार्केटिंग स्वचालनमार्केटिंग टेक स्ट्याकमार्केटिंग टेक्नोलोजी स्ट्याकमार्टेक स्ट्याकयोजना व्यवस्थापनसासबिक्री बलखोज इन्जिन अनुकूलनसामाजिक मिडिया व्यवस्थापनWordPress